★မြန်မာ့အလင်း★: အာဖရိကမှ သာသနာ့အလင်းရောင်
တနေ့က ကျနော်တို့ ဆီပုံးမှာ ကို/မ Heart ကနေ အာဖရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက် သာသနာပြု ဗီဒီယိုလေးလင့်လေးကို လာရောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (ကို/မ Heart ကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။) အဲဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ အင်မတန်မှ ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ Uganda လူမျိုး ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးကို ဖူးမြင်ရပါတယ်။ ဘွဲ့တော်ကတော့ ဗုဒ္ဓရက္ခိတဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီး ဦးသီလနန္ဒက ဥပဇယ် ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးသီလနန္ဒနဲ့ ဘီလင်းဆရာတော်ကြီး နှစ်ပါးရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အရ အာဖရိကတွင် သာသနာမျိုးစေ့စပြီးချသူဖြစ်ပါသည်။ ပါရမီရှိသူတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်ဟန်ရှိ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ စကားလုံးတောင် မကြားဖူးတဲ့ ဒေသမှာ အဖေါ်မပါပဲ တစ်ဦးတည်း သာသနာပြုရတာ ဘယ်လေက်ခက်ခဲမလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို အပြုံးမပျက် ကျော်လွှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုဘုန်းဘုန်း၏ မယ်တော်ဟာ မွတ်ဆလင်ကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာဖရိကမှာ သာသနာစပြုတဲ့ သံဃာဟာ မြန်မာ့သင်္ကန်းနဲ့ မိုလို့ အင်မတန်ကို ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ဦးဇင်း ဗုဒ္ဓရက္ခိတကို ကြည်ညိုနိုင်ဖို့ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းဟာ အခက်အခဲတွေကြားထဲက Uganda Buddhist Centre ကို ဆောက်လုပ်နေပါပြီ။ ကျောင်းအရွယ်ကလည်း အတော်ကို သေးငယ်ပါတယ်။ လက်ရှိအထိ မပြီးဆုံးသေးပါ။ ကျနော်တို့ မြန်မာများအနေနဲ့ ဆရာတော်၏ သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို တတ်စွမ်းတရွေ့လှုဒါန်းဖို့ နှိုးဆောင်အပ်ပါသည်၊ အင်တာနက်မှလည်း လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်ပါက comment နေရာတွင် ရေးသားပြီးပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။ သာဓုခေါ်ချင်လို့ပါ)
ဘုန်းဘုန်း၏ ဓါတ်ပုံများကြည့်လိုပါက ဒီကို Click လုပ်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:11 AM
if budha bar thar ga ..a pyawt swal swal pee..warr myo yin..u all say ok ...if muslim do the same ..u all will yell..why ?
see this is the proof of "No Effort No Luck" when u effort..u all can do the same..
budhism is also not origin from burma...muslim is also not origin from burma...all relegions are imported from foreign country. but we all are the same burmese who orginally borned in burma. why do we need to fight for imported relegions where u want to follow ..follow...what do u feel better for your life time success n peacefulness ..go ahead ..it is call "freedom of relegion".
we all have every single right to follow whatever relegion that we want n feel confortable to.
so ... i've no comments for budhism growing its relegion seeds in muslim country...with respect its freedom...if we r scrious n insane we could yell " whatdhell come n borthering in muslim country go outtt " like u all do to rohinjers...we r not that low culture so we've no comment for this monk growingabudhism relegion seed in muslim country. we will not sware rude n insults like in this website did to other relegions showing its low culture but for us we'll do like that because we muslim have big heart open wide for all kind of human beings with human respect.
if you want to develop ur thar tha nar ..first you must know n respect how to treat likeahuman toahuman first.otherwise developingathar tha nar with low culture is killing ur own thar the nar.
no need to go insane...no need to go serious like hell ...remember budhism,islam, christian etc..all kind of relegions are not from burma ...all imported thar tha nar..but we all are all borned in burma originally...first we must love each other ...then foreign relegions...
being the right person is most important then trying to find the right person...and the right thing.
with deep from my heart!